DF Somaliya oo sheegtay inay bilaabeyso baaris la xiriirta musuq-maasuqa | HalQaran.com
Home Warar Cusub DF Somaliya oo sheegtay inay bilaabeyso baaris la xiriirta musuq-maasuqa
DF Somaliya oo sheegtay inay bilaabeyso baaris la xiriirta musuq-maasuqa
Muqdisho (Halqaran.com) – Hanti-dhowraha Guud ee Qaranka Soomaaliya, Mudane Maxamed Maxamuud Afgooye ayaa sheegay in Xafiiska Hanti dhowrka uu ballaarinayo howlaha lagu baarayo xafiisyada dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka.
Mr. Afgooye ayaa sheegay in Xafiiska Hanti-dhowrka Guud ee Qaranka iy kuwa dowlad goboleedyada ay qaadanayaan Shaqaale oo tababarayo baaris maaliyeed oo la xiriira dhinaca musuq-maasuqa.
Sidoo kale, wuxuu sheegay inay waajib tahay in sanad walba la helo natiijo baaris ee lagu kalsoonaan karo oo lagu xisaabiyo nidaamka maaliyadda Qaranka.
Hanti-dhowraha Guud ee Qaranka Maxamed Maxamuud Afgooye ayaa sheegay in xoojinayo kor u qaadida isla xisaabtanka dhanka Maaliyadda dalka si loo gaaro nidaam maamul oo dowlad wanaag ku dhisan.
Ugu dambeyn, Hanti-dhowraha guud ee Qaranka Maxamed Maxamuud Afgooye ayaa hadalkaan ka sheegay Shir sanadeedka Hanti-dhowrka Qaranka iyo kan Dowlad goboleedyada oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Hanti-dhowraha guud ee Qaranka